Xaaf iyo Axmed Madoobe ma waxaa loo dagay xeelad siyaasadeed? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Xafiiska Madaxweyne Xaaf
Image caption Xaaf iyo Axmed Madoobe ayaa isaga soo baxay shirkii Garoowe
"Maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed markii horaba waxaa lagu tirinayay inay dowladda la safan yihiin, hadda Puntland ayaa ku soo biirtay, qaabkaas ayayna Galmudug iyo Jubaland u fahmayaan", sidaas waxaa ku doodaya Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
"Waxaad moodaa in xukuumadda dhexe ay ku qancisay maamulka Puntland in si uun loo wadahadlo, maamullada isku harayna ay masiirka dalka ay ka naxaan, sidaas daraadeedna Madaxweyne Deni iyo saaxiibadiisna ay go'aansadeen in wadahadallo saddex geesood ah ay galaan", ayuu yiri Bursaliid.
Lahaanshaha sawirka Xafiiska Madaxweyne Axmed Madoobe
Image caption Xaaf iyo Axmed Madoobe ayaa isaga soo baxay shitkii Garoowe
"Maamuladii isaga soo tegay shirka Garoowe waxay caddaadis kala kulmi doonaan beesha caalamka, xukuumadda dhexe oo aan wax badan u hambayn doonin, lagana yaaba inay si toos ah ugu dhar dhigato sidii nimankaas ay meesha uga saari lahayd", ayuu raaciyay Bursaliid.
"Khilaafka iyo wixii jiray in la dhameeyo ayanau diyaar u ahayn, laakiin nasiib darro Madaxweynaha iyo Ra'iisul wasaaraha diyaar uma ahayn in la heshiiyo ama ay cid la heshiiyaan", sidaas waxaa BBC-da u sheegay Madaxweyne Xaaf kadib shirkii Garoowe.
"Qoddobka koowaad wuxuu ahaa in la helo gole ama madal siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isku wareystaan oo xaaladda dalka uu maryo looga tashado, marwalbana looga tashado masiirka iyo siyaasadda", sidaas waxaa magaalada Kismayo ka sheegay Axmed Madoobe.
Image caption Shirkan ayaa la shegay in wax heshiis ah uusan ka soo bixin
Golahan oo howshiisa aysan ahayn howlaha sharci dejinta iyo fulinta balse ay tahay heshiisyo siyaasadeed oo tilmaamaya sida la rabo inay u shaqeyaan hay'adaha sharci dejinta iyo fulinta.
Qoddobada kala ah 51 ilaa iyo 52 ee dastuurka kumeel gaarka ayaa dhigaya sidatan: "Jiritaanka iyo joogtaynta xiriirro iskaashi iyo istaageerid labo-dhinacle ah oo ka dhexeeya Dawladaha xubnaha ka ah federaalka dhexdooda iyo dawladaha xubnaha ah iyo Xukuumadda Federaalka ah;
Xukuumadda Federaalka ah iyo Xukuumadaha xubnaha ka ah waxaa waajib ku ah in madaxweyneyaasha Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Mas'uuliyiintooda sare yeeshaan kulammo joogto ama kaltan ay kaga wada xaajoodaan arrimaha degaammadooda wada saameeya oo ay ka mid yihiin: